राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्दै, के देशमा संकटकाल लगाउला ? - Malayakhabar
होम पेज फिचर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्दै, के देशमा संकटकाल लगाउला ?
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्दै, के देशमा संकटकाल लगाउला ?
काठमाडौं:= प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक आह्वान गर्नु भएको छ। सिंहदरबारस्थित परिषद्को कार्यालयमा बिहान नौ बजेका लागि बैठक डाकिएको छ । बैठकको अध्यक्षता परिषद्को प्रमुख तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुनेछ ।
यसअघि परिषद्को बैठक ५ कात्तिक ०७७ मा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको थियो । त्यही राति भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘र’का प्रमुख सामन्त गोयललाई प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा स्वागत गर्नुभएको थियो।
अघिल्लो लेख इजरायलमा कार्यरत नेपाली महिला साबित्रा लुइँटेल घिमिरेको हृदयघातको कारण मृत्यु।
पछिल्लो लेख कँगोमा इटालियन राजदूत लुका एत्तानासियाको हत्या।